I-China iOlimpiki iBarbell esemgangathweni yokuphakamisa iintsimbi iBarbell 2.2m abavelisi kunye nabathengisi | Yolanda
Ibha yeOlimpiki yintsimbi ephindaphindayo onokuyisebenzisa kuzo zonke iilifti. Ibha inempawu ze-chrome ezingama-20 KG, ibha engama-28MM ene-knurl ephakathi kunye namanqaku e-knurl amabini. Uvavanywe kwi-220,000 yePSI, iBar igcina isabhokhwe esifanelekileyo sokuphindaphinda okuninzi kodwa inokumelana nomthwalo kunye nokusetyenziswa gwenxa kwamandla okuphembelela amandla. Imikhono e-welding-welding ine-stainless steel finish kunye ne-bronze bushing kunye neebheringi ezinika ibha i-spin ehambelanayo.
AMANDLA E-220,000 WOKUQINISEKA KWENKQUBO:Ibha yeTitan's 20KG Bar yenziwe nge-chrome kunye nentsimbi engenasici, ivelisa ishafti ngamandla angama-220,000 ePSI. I-shaft nganye iphantsi, ipholile kwaye yavavanywa ngokukodwa ukunika inani elifanelekileyo le-whip okanye i-flex kwi-bar yokunyusa i-Olimpiki.
AMANQAKU ESIBINI:Ibha inamanqaku e-knurl aphakathi nendawo ukuze kubekwe lula izandla. Amanqaku e-knurl amabini akuvumela ukuba usebenzise iBar yokunyusa okuninzi kunye nokucima i-rack yakho.
Bhangqa ngeseti yeepleyiti zebhuma: Ibha iyahambelana nayo nayiphi na ipleyiti esemgangathweni yeOlimpiki, Ezi bumpers zivavanywe emfazweni zinemibala enekhowudi, zivelisa ukungangqinelani okufileyo, kwaye ziyafumaneka uku-odola kwiiseti zesiko.
BANGELA:Gcina iipleyiti kwibar yakho eneekhola. Ezi khola zenzelwe izixhobo zokuphakamisa ubunzima beOlimpiki. Banomphezulu wokujija olula oxinzelela phantsi kumkhono we-barbell kunye ne-cylindrical bit. Ukugcina iiplate zakho endaweni kunye nokujika okulula kwesikrufu.
UKWAKHIWA KOMGANGATHO:I-20KGBar ine-Chrome, 28MM shaft enamandla angama-220,000 e-PSI. Imikhono e-welding-welding ine-stainless steel finish kunye nobhedu bushing kunye neebheringi.
Igama leBrand: Yolanda Fitness / Uhlobo lweBhari: IiBhari zeOlimpiki / Ukusetyenziswa kweBhari: Ubuninzi beBar / Ubunzima beBhari: 20KG / Ubude beBhari: 2.2M / Ububanzi beGrip: 28MM / Ukulayisha ubukhulu: 50MM / Ukulayisha amandla: 200KG / Knurl: Uyilo oluBini oluBini / ukugqiba: I-Chrome / Bushing okanye i-Bearing: Bushing / Collars: Isibini
Egqithileyo Isliphu esirhabaxa sokumelana neebhendi zebhooty
Okulandelayo: Non zelanga Soft Yoga Block